Sidee Waxaad samayn kartaa Ringtone Own
Sida loo sameeyo aad Ringtone gaar ah iPhone iyo Android Phone
Qaar badan oo naga mid ah, mar uun nolashanada ayaa ahaa mid aad u waalneyn la mid song gaar ah si heer ah in aan mar walba u ciyaaro in ka badan iyo in ka badan. Waxaan nahay waanu waxaan sidoo kale doonayaa inaan u qotomiyey sidii a giraan ah ee casriga ah noo midab!
Sidaas, waayo, dadka oo kuwa doonaya in ay qarka u gabay jecel sida ay ringtone, qodobkan waxaa loogu talagalay adiga! Waxba ma ahan haddii aad tahay macruufka ama Android user; waxaa jira dhowr hab si aad u song jecel sida aad heegan ringtone BILAASH. Haa, uma baahnid inaad u leeyihiin in ay ku qaataan dime ah loo sameeyo, kaliya raacaan hababka hoos ku qoran.
Habka 1: Isticmaalka barnaamijka desktop ah
Habka 2: Isticmaalka Adeega ah Online
Habka 3: Isticmaalka App ah
Habka 4: Isticmaalka Lugood
1 Talaabada file music Record
Waxaad furi kartaa website-ka halkaas oo track aad jeceshahay ama song waa ka hor inta aanad riix Record button ama waxa guji ugu horeysay ka hor inta raadinaya. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay guji hal mar si loo joojiyo qoro. Si ay u qiimeeyaan more Settings , icon yahay geeska midig ee sare ee interface ka. Waxaa General, Control iyo Qaabka ah goob si aad u qabsato.
General - Go'aami meesha aad jeclaan doonaa in uu kaydiyo ama badbaadin files music aad duubay.
Xakamaynta - Calan inay u boodboodaan xayaysiisyada ama qabsato inay u boodboodaan joojis dheer intii lagu duubay iyada oo goob kala automatic .
Qaabka - ahayn sida MP3 ah, waxa kale oo aad ku badbaadin karto file music aad sida M4A ah u iDevices aad.
Tallaabada 2 Abuur ringtone (ama playlists in Lugood wareejiyo)
Sida lagu muujiyey by shaashada ka, waxaad yeelan doontaa in aad u aragto liiska faylasha muusig mar uu soo bixi. Ka dib markii in, waxaad si fudud u riixi kartaa icon dawan in la furo ilaa uu suuqa kala falinjeeerka. Markaas, waxaad dooran kartaa taas oo qayb ka mid ah wadada aad jeceshahay doonaa in ay jar iyo badbaadin sida ringtone ah.
Haddii kale, xaq-riix wadada kala haddii aad jeclaan doonaa si ay u eegista wareejiyo Lugood aad, waxa ay sii kordhineysaa in ay playlist ama tirtirto track ah iyo wax ka badan. Waxaa sidoo kale jira fudud feature hal-click ah in aad isticmaali karto sidii iftiimiyay in shaashada ah (hoose ee interface) si loo soo wareejiyo music oo dhan in aad maktabadda si Lugood.
Si aad u awoodo in aad ringtone, ama ringtone kasta oo aad casriga ah, waa in aad ku badaley aad song in file maqal ah. Markaasaa waxaa jira wax badan oo adeegyada internetka oo lacag la'aan ah si uu kaaga caawiyo la. Mid ka mid ah goobaha ugu fudud in ay bixiyaan adeegyo qaadashada ringtone for free waa aidiko.net, si ay u ogaadaan sida tani u shaqayso, raac edbinta hoos ku qoran.
Habkani waa mid aad u fudud, kaliya inay raacaan talaabooyinkan fudud:
Tallaabada 1 Dooro Song ah
Sidaas hor inta aadan xitaa bilowdo, go'aan song aad dooneyso inaad sida giraan aad qarsan. Tan waxaa laga yaabaa hees ka desktop ama hees ka website a music. Haddii ay tahay song ah oo la badbaadiyey on your computer, guji "Upload 'badhanka laakiin haddii ay hees aad ka heli bogga internetka ee ah sida YouTube, guji' galaan URL ah '.
Tallaabada 2 Hab-koombiyuutarka
Haddii aad doorato file ka your computer, file si toos ah si aad u geliyaan doonaa oo kaliya in uu sugi waayo, waxaa dhammayn, waa inuu noqdaa mid u eg sawirka ku jira.
Laakiin haddii aad doorato in aad isticmaasho hees ka YouTube, habka koombiyuutarka noqon doonaa sida mid ka mid ah oo ku saabsan sawirka labaad.
Tallaabada 3 Dooro qayb ka mid ah Heesta
Marka song la uploaded, aad haatan dooran kartaa qayb ka mid ah hees aad rabto inaad ka dhigay sida aad ringtone by jiidayeen bar buluug gal qaybta aad rabto. In internetka gaar ahaan, waxaad dooran kartaa 29 ka qeyb labaad ee song ah in sida aad ringtone. Marka aad samaysay, riix 'Create Ringtone!' button.
Tallaabada 4 Download Ringtone ah
Waxaad markaas doonaa si toos ah bogga download. Haddii aad isticmaalayso iPhone ah, riix batanka 'iPhone', haddii aad isticmaalayso qalabka kale ama Android phone, riix batanka 'Mobile'. Ka dib markii doorashada oo ka mid ah waa la jaan qaada, waayo, qalab aad, riix batanka 'Download hoose. Waxa markaas aan ku badbaadi doontaa desktop oo diyaar u ah in lagu wareejiyo on inay qalab aad.
Haddii aad dooneyso inaad aad song jecel sida ringtone la'aan laakiin aan haysan fursad ama kaliya aad u caajis in ay tagaan computer desktop aad, waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay si toos ah samaynta ka macruufka ama qalab Android aad. Waxbarashada hoos ku bari doonaan sida aad.
a) Isticmaalka App macruufka ah
Tallaabada 1 Tag App Store iyo rakib Kan sameeyey Ringtone a App
Raadi ringtone app gaare iyo mid ka mid ah in rafcaan in aad ugu soo dajiyo. Inta badan barnaamijyadooda la siiyaa waa lacag la'aan.
Tallaabada 2 Dooro Song aad rabto
Sida marka aad isticmaasho ringtone gaare online, waxaa lagu weydiin doonaa in aad doorato song lagu dhejiyo sida aad ringtone. Waxaad dooran kartaa song kasta oo aad jeceshahay aad ka Music Library.
Tallaabada 3 Dooro qayb ka mid ah hees aad rabto inaad ka dhigay sida aad ringtone
In halkan waxaad dooran kartaa qayb ka mid ah heesta gaar ah aad dooneyso in aad noqoto wixii aad ringtone by kabacdi aad shaashadda. Waxaad dooran kartaa 30 ka qeyb labaad ee heesta inuu ahaado qoyskaaga ringtone.
Tallaabada 4 Save Ringtone ah
Marka aad samaysay, tuubada on disc ka icon kumbiyuutarka dhinaca midigta hoose ee shaashadda si loo badbaadiyo. Marka loading waxaa loo sameeyaa, waxaad badbaadin kartaa ringtone ay u loading in aad telefoon via file sharing Lugood.
b) Isticmaalka App Android ah
Tallaabada 1 Tag Google Play Store iyo rakibi Ringtone a Samee App
Nooca ee 'Ringtone Kan sameeyey,' sida aad keyword in baadi app ah oo ku saabsan Google Play Store, waxaa lagu siin doonaa liis dheer oo Chine loogu tala galay, taas aawadeed aad. Dooro mid ka mid ah in uu yahay aad u wanaagsan oo u soo dajiyo.
Tallaabada 2 Browse u Song aad rabto
Marka aad furto app, waxaa idin tusin doonaa liiska heeso aad hore u sameeyey iyadoo la isticmaalayo app. Haddii song aad rabto in aad isticmaasho lama ku qoran, guji badhanka raadinta hoose oo nooca magaca heesta aad rabto in aad isticmaasho ama caleenta Tababaraha file aad gacanta ilaa aad ka heshid heesta aad raadinayso, ka dibna garaac waa in ay doortaan.
Tallaabada 3 Dalag Qaybta aad doonayso inaad isticmaasho
Ka dib markii doorashada gabaygii, aad haatan noola karaa qaybta aad rabto oo kaliya in ay isticmaalaan sida aad ringtone. Si fudud u mari inay jiidi ulaha gudban ka oo muujinaya bilowga iyo dhameysan qeybo ka mid ah ringtone iyo dooran qaybta aad rabto.
Marka ay Iyada oo aad ringtone, hadda waxa ay ku badbaadin karto by siyoodba on disk icon ee kumbiyuutarka laga helaa qaybta sare ee shaashada mobile. Waxa kale oo aad loo ogol yahay in magaca faylka wax kasta oo aad rabto. Ka dib markii ay ka bedelayaan, guji 'Save' button. Markuu meeshaas hore uga waxaad yeelan doontaa fursad aad ku dhacna sida aad default ringtone ama waa Daartii sida ringtone ah qof gaar ah oo aad in yeedhayaa.
Talo: On doorashada app on Lugood ama Google Play Store, mar walba hubso in aad akhrido heerka iyo comments sameeyo dadka kale ee si ay u awoodaan in ay ogaadaan kan ugu wanaagsan si ay u isticmaalaan.
Ma badan oo dadka isticmaala iPhone tan ku ogaado, laakiin waxa kale oo aad ka dhigi kartaa ringtone isticmaalaya software Lugood lacag la'aan ah. Si aad u ogaato sida, akhri edbinta tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
Tallaabada 1 Daahfurka Lugood iyo qaado Song aad rabto
Dooro heesta ka mid ah liiska heesaha aad qabto maktabadda Lugood aad, marka aad ogtahay oo song aad rabto in aad isticmaasho, xaq guji ku yaal oo guji "Hel Info '.
Tallaabada 2 Calan Qaybta aad doonayso inaad isticmaasho Sida aad Ringtone
Marka aad gujisid 'Hel Info' tag 'Xulashada' tab, halkan waxaad dooran kartaa markii aad rabto in aad bilowdo iyo soo afjaro gabaygii, in sidoo kale ay qayb ka mid ah hees aad u heli doonto sida giraan aad qarsan. Guji "OK '.
Tallaabada 3 Samee File nuqul
Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya xaq-song doortay mar kale guji 'Abuur ACC Version' haddii aad isticmaalayso Windows computer ah, haddii aad isticmaalayso Mac ah, guji "Abuur Apple sameecadda File Audio '. Markaas Waxaad heli doontaa nuqul ka mid ah hees, laakiin waxaa la jaray dhererkiisa aad u dhigay.
Tallaabada 4 Open Song ee File Folder
Midig u guji heesta labalaabka oo guji 'Show in Windows Explorer haddii aad isticmaasho computer Windows ah iyo haddii aad tahay user Mac ah, guji' Show in Finder '.
Talaabada 5 Magaca Extension ee File
Laga soo bilaabo .m4a magaca kordhin faylka si .m4r, tani waa qayb ka muhiim ah sababta oo ah haddii aadan isbedel lagu sameeyo magaca kordhiyo si .m4r, waxa aan la doonayaa inuu ciyaaro sida ringtone ah in aad iPhone.
Tallaabada 6 Delete File ah labalaabka waxaad samaysateen
Midig u guji song aad sameeyey maktabadda Lugood iyo ku dhufo "Delete ', waxa aad weydiin doonaa haddii aad rabto in aad u guurto heesta loo doortay in ay Recycle Bin ama sii ee folder Lugood Media, guji' Ka dhig File".
Tallaabo 7 dhaqaaq Ringtone in ay Lugood Library midab
Waxaad ku samayn kartaa adigoo u socda Explorer Windows meesha ringtone la badbaadiyey iyo double waxa guji. Waxaa markaas si toos ah u gudbin doona maktabadda midab Lugood.
Tallaabada 8 Bedelka Song si ay Your iPhone
Haddaba arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in Lugood ah, doortaan 'codadka' tab ka iPhone doorashada. Hoos waxaa ku qoran doorashada iPhone, guji "nidaameed Dhammaan codadka" oo sug syncing ku dhammayn. Marka sameeyo, waxaad ka heli kartaa ringtone cusub ee aad ku sameeyey, waxan u samaynaysaan aad iPhone: Settings> Sound> Ringtone iyo mid ka mid ah idinka abuuray oo keliya dhirtuba.
Kuwan habab fudud oo aad hadda beddeli kartaa ringtone caajis inaad heeso aad ugu jeceshahay. Kuwaas waxaa jira habab fudud in la raaco, iyo ugu of dhan, iyagu waa lacag la'aan. Sidaas waxaan u tijaabin hadda!
Sida loo abuuro An playlist Online Music
Sidee loo Diiwaan Audio la Best taariikhqorihii Audio
iPhone Ringtone Converter: Beddelaan Video inay iPhone Ringtone (iPhone 5 ka mid ah)
Top 10 Hulu downloader - Download Hulu videos ku yaalla si fudud oo dhaqso
Sida loo Download VEVO Video ka YouTube
Sida loo Download Videos internetka
Sida loo Download VideoBash Videos la One Click
Sida loo free download iyo Guba Metacafe Videos in DVD
> Resource > Download > sida aad Ringtone Own